Shiinaha Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit soosaarayaasha iyo alaabada | Liming Bio
Qalabkan PCR-ga ah ee xasaasiga ah, ee u diyaarka ah in la isticmaalo ayaa lagu heli karaa qaab lyophilized (habka qaboojinta-qalajinta) kaydinta muddada dheer. Qalabkan waa la qaadi karaa oo lagu kaydin karaa heerkulka qolka waana xasilloon yahay hal sano. Tuubo kasta oo ka mid ah 'premix' waxay ka kooban tahay dhammaan reagentyada loo baahan yahay kordhinta PCR, oo ay ku jiraan Reverse-transcriptase, Taq polymerase, primers, probes, iyo dNTPs substrates. Kaliya waxay ubaahantahay kudar 13ul oo biyo ah iyo 5ul oo lagaarsiiyey aaladda RNA, ka dibna waa la ordi karaa laguna weynaanayaa qalabka PCR.
Mashiinka qPCR waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
1. Ku dheji mugga tubbada PCR 8 strip 0.2 ml
2. Aad leedahay in ka badan afar kanaal oo lagu baaro:
7500Real-Time PCR System, Biorad CF96, iCycler iQ ™ Nidaamka Ogaanshaha PCR-waqtiga-dhabta ah, Stratagene Mx3000P, Mx3005P
Dhibaatada gaadiidka safarka qabow ee reagent ogaanshaha aaladda Nucle Coronavirus
Marka reagentyada ogaanshaha aaladda nukliyeerka caadiga ah lagu qaado masaafo dheer, (-20 ± 5) storage kaydinta silsiladda qabow iyo gaadiidka ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in bioactive ee enzyme-ka ku jira reagentu ay firfircoon tahay. Si loo hubiyo in heerkulku gaadho heerka, dhowr kiiloo garaam oo baraf qalalan ayaa loogu baahan yahay sanduuq kasta oo tijaabada nukleerka asiidhka xitaa ka yar 50g, laakiin waxay socon kartaa oo keliya laba ama saddex maalmood. Marka laga eego dhinaca dhaqanka warshadaha, miisaanka dhabta ah ee reagentyada ay soo saaraan soo saarayaasha ayaa ka yar 10% (ama aad uga yar qiimahaan) weelka. Culeyska intiisa badan wuxuu ka yimaadaa baraf qalalan, xirmooyinka barafka iyo sanaadiiqda xumbada, sidaas darteed qiimaha gaadiidka waa mid aad u sarreeya.
Bishii Maarso 2020, COVID-19 wuxuu bilaabay inuu si baaxad leh uga baxo dibedda, iyo baahida loo qabo reagent ogaanshaha Nucleic acid Nucleic acid ayaa si aad ah kor ugu kacay. In kasta oo kharashka badan ee dhoofinta reagentayadu ku jiraan silsiladda qabow, soosaarayaasha badankood wali way aqbali karaan tirada badan iyo faa'iidada badan awgeed.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la hagaajinayo siyaasadaha dhoofinta qaranka ee alaabooyinka ka-hortagga aafada, iyo sidoo kale kor u qaadista kantaroolka qaran ee qulqulka dadka iyo saadka, waxaa jira kordhin iyo hubin la'aan waqtiga gaadiidka ee reagent, taas oo keentay dhibaatooyin alaabeed caan ah oo sababay gaadiidka. Waqtiga gaadiidka la dheereeyay (waqtiga gaadiidka qiyaastii nus bil waa mid aad u badan) waxay keentaa cillad soo noqnoqod leh oo alaab ah markay badeecadu gaarto macmiilka. Tani waxay dhib ku keentay inta badan reagent reagents-ka shirkadaha dhoofinta.
Tikniyoolajiyadda loo yaqaan 'Lyophilized' ee loo yaqaan 'PCR reagent' ayaa ka caawisay daabulista ogaanshaha Novel Coronavirus ogaanshaha aaladda nucleic acid reagent adduunka oo dhan
Reagents-ka PCR-ga la nuugey ayaa la qaadi karaa oo lagu kaydin karaa heerkulka qolka, taas oo aan yareyn karin kharashka gaadiidka, laakiin sidoo kale ka fogaaneysa dhibaatooyinka tayada leh ee ay sababaan geedi socodka gaadiidka. Sidaa darteed, qorista reagent waa habka ugu wanaagsan ee lagu xallin karo dhibaatada dhoofinta dhoofinta.
Lyophilization waxay ku lug leedahay in lagu xaliyo xalka xaalad adag, ka dibna hoos loo dhigo oo loo kala saaro uumiga biyaha iyadoo lagu jiro xaalad faaruq ah. Sunta qallalan waxay ku jirtaa weelka oo leh halabuur isku mid ah iyo waxqabad. Marka la barbardhigo reagent-yada caadiga ah ee dareeraha ah, nuugista Nolol Coronavirus Nucleic acid ogaanshaha unugyada buuxa ee ay soo saarto Liming Bio waxay leedahay astaamaha soo socda:
Xasiloonida kuleylka ee aadka u xoogan: waxay ku istaagi kartaa daaweynta 56 ℃ muddo 60 maalmood ah, qaab dhismeedka waxqabadka reagentana weli isma beddello.
Kaydinta heerkulka caadiga ah iyo gaadiidka: looma baahna silsilad qabow, looma baahna in lagu kaydiyo heerkul hoose inta aan la furin, si buuxda u sii daa booska qaboojinta.
Diyaar u ah in la isticmaalo: lyophilizing dhammaan qaybaha, looma baahna qaabeynta nidaamka, iyadoo laga fogaanayo luminta qaybaha leh isku-buuqsan sare sida enzyme.
Bartilmaameedyada Multiplex ee hal tuubo: Bartilmaameedka ogaanshaha wuxuu daboolayaa hiddo-wadaha cusub ee coronavirus ORF1ab hidda-wadaha, N hidda-wadaha, hiddo-wadaha S si looga fogaado fayraska hidde-wadayaasha. Si loo yareeyo diidmada beenta ah, hiddo-wadaha RNase P ee bini-aadamka waxaa loo adeegsadaa kontorool gudaha ah, si loo daboolo baahida caafimaad ee loo qabo xakamaynta tayada muunadda.
Buugaagta PCR / MSDS
Xaashida xaqiiqda ee daryeelka caafimaadka
Waraaqaha PCR 3.0
Xaashida xaqiiqda ee bukaanka
Hore: SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Rapid Test
Xiga: SARS-CoV-2 Antigen Degdega Imtixaanka
Multiplex Real-Time Pcr Qalabka
Novel Coronavirus (Sars-Cov-2) Multiplex Real-Time Pcr Qalabka
Qalabka Sars-Cov-2 Rna Real-Time Pcr Kit
Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Coronavirus Antigen Test,